I-Semalt icebisa iziVumelwano ezi-5 zeThuluzi lokuLungiswa kwesithombe
Isixhobo sokukhutshwa komfanekiso sinceda uvelise uludwe lwemifanekiso efunyenweyo kwiwebhusayithi ekhethiweyo. Ungayisebenzisa le sixhobo ukukhipha imifanekiso uze uyithumele kwifomathi ye-JSON. Esi sixhobo sinesibonakaliso sokusebenzisa umsebenzisi kwaye kulula ukuyisebenzisa. Umele ufake i-URL yewebhusayithi ofuna ukuyihlalutya kwaye uyifake inkinobho ethi "Thumela". Isixhobo sokukhutshwa komfanekiso ngokukhawuleza sifumana umxholo kwaye senze iziphumo ezifunayo. Ezinye zeenguqu zayo zakutsha zikhankanywe ngezantsi - strong sleeping tablets online.
I-ExtractPDF inceda ukutshekisha amaxwebhu ePSP uze uwahlule kwicandelo ngalinye: imifanekiso, itekisi, iifom, kunye nemethadatha. Unokwenza uninzi lwewebhsayithi njengoko ufuna ngaphandle kokunciphisa umgangatho. Kufuneka ufakele i-URL kwaye vumela i-ExtractPDF ifake idatha yayo
I-Konwerter yenye enye i-extractor yecala eyenza imifanekiso yakho kunye namaxwebhu e-Word ngokukhululeka. Esi sixhobo silungile kumashishini nakubashishini. Unokwenza iifayile ze BMP, GIF, JPG kunye ne-PNG usebenzisa le sixhobo. Kufuneka uqakathekise idatha kwaye cinezela iqhosha elithi "Phuma" ukuze uqale ukukrazula. Xa i-Konwerter eyenziwe ngokutshiza, ungayilanda idatha kwifom efiselekayo.
I-SmallPDF yenye enye inguqu yesitoreji somfanekiso. Unobungozi obunomsebenzisi kwaye unokwenza imifanekiso eninzi njengoko ufuna. I-SmallPDF ayifaki kuphela iifayile zeJPG kunye ne-PNG kodwa iphinda icokise idatha evela kumaphepha e-PDF. Unokufumana idatha kwifom efundwayo kwaye ikhutshwe kwaye ingavelisa ezininzi izikhokelo kwi-intanethi. Xa ufaka i-URL okanye ulayishe umfanekiso, kufuneka ucofe kwi-"Scrape" iqhosha kwaye vumela le sixhobo lenze umsebenzi walo.
I-PDF ye-intanethi enye yeenguqulelo zezona zinguqulelo zesitoreji somfanekiso. Ikufumana imifanekiso ephakamileyo ephezulu kunye neenkcukacha zephepha elikhulu lamaphepha ewebhu ngokulula. Umqobo wokuphela kukuba esi sixhobo sinokukhangela imifanekiso emithathu ngexesha. Oku kuthetha ukuba awukwazi ukuyisebenzisa kwiiprojekthi ezininzi kwaye uza kufuneka uthenge i-premium version. I-PDF kwi-Intanethi ayifuni ukukhutshwa kwaye iyakwazi ukuphatha imisebenzi yakho yokukhishwa kwedata kwi-intanethi. Yinkqubo epheleleyo neyithembekileyo, ifanelekileyo kumashishini, abaprogram, iikhowudi, iingcali ze-IT kunye ne-webmasters.
PDFMate yinto enye ingqungquthela yecandelo lokukhutshwa kwesithombe. Okwangoku ikhona kubasebenzisi be-Windows kuphela kwaye iyaziwa ngokubanzi kubasebenzisi bayo bomsebenzisi. Nge-PDFMate, unokwenza imifanekiso eninzi okanye iifayile zePafile njengoko ufuna. Esi sixhobo sitshintshisa idatha ukusuka kumaphepha aphuzi, iphepha elimhlophe, iifom zengxoxo kunye neenkcukacha ze-intanethi. Iyakrazula iifayile ze-PNG kunye ne-JPG kwaye isofthiwe ethembekileyo.
Ukulungiselela ukulungiswa kweenjini ezifanelekileyo, yonke imifanekiso ifanele ikhethe iimpawu ze-ALT. Iimpawu zikwazisa iGoogle malunga nemifanekiso yakho kwaye uyinike ingcamango yoluphi uhlobo lomxholo oshicilelayo. Iinguqulelo ezingentla zethuluzi lokukhutshwa komfanekiso zithembekileyo kwaye zichanekile. Basinika iziphumo ezifunayo kwaye abayidingi nayiphi na ikhowudi. Unokuzuza kulo mfanekiso wesitoreji somfanekiso njengomntu ongeyena umprogram.